KDE: Ny Spectacle dia ahafahantsika manisy fanamarihana ny sary avy amin'ny fampahafantarana | Ubunlog
rehefa Ity herinandro ity ao amin'ny GNOME, izao no anjaran'ny This week in KDE. Miaraka aminao Plasma 5.23.4 Eo amintsika, inona ny fanavaozana teboka fahefatra amin'ny andiany faha-25, nanomboka nifantoka bebe kokoa tamin'ny ho avy ny tetikasa. Maro amin'ireo fanovana anaranao amin'ity herinandro ity no ho tonga ao amin'ny Plasma 5.24, raha ny hafa kosa hanaraka rehefa tonga miaraka amin'ny endri-javatra vaovao ny KDE Gear 21.12, ny fampiharana ny volana Desambra.
Anisan'ireo vaovao momba izany nandroso antsika androany Nate Graham dia manana iray izay hitako manokana fa tsy dia ilaina loatra, fa tsy satria tsy izany. Heveriko fa tsy mahasoa ahy izany satria mifandraika amin'ny zavatra tsy tsaroako matetika ampiasaina: ny Fihetseham-pandrenesana spectacle miasa. Ny fitaovana pikantsary KDE dia ahafahantsika manisy fanamarihana momba azy ireo, ary tsy ho ela dia ho afaka hamoaka ny tonian-dahatsoratra avy amin'ny fampandrenesana lozisialy.
1 Endri-javatra vaovao Tonga amin'ny KDE
2 Fanamboarana bibikely sy fanatsarana ny fahombiazana
3 Fanatsarana ny interface-n'ny mpampiasa
4 Rahoviana izany rehetra izany no ho tonga amin'ny KDE?
Endri-javatra vaovao Tonga amin'ny KDE
Alohan'ny hanononana ny zava-baovao voalohany ao amin'ny lisitra dia tsy maintsy milaza aho fa raha tsy misy ny fitsapana azy dia manana fisalasalana momba ny fomba fiasa aho. Hamela antsika manova sary efa misy Ahoana no ataon'ny mpamoaka lahatsoratra Shutter? Mety izany.
Ny Spectacle izao dia mamela ny fanondroana pikantsary efa misy amin'ny alalan'ny bokotra iray ao amin'ny fampahafantarana na hevitra –Hanova-misy avy amin'ny andalana baiko (Bharadwaj Raju, Spectacle 22.04).
Ny rakitra mozika sy ny playlist dia azo taritina sy ariana avy amin'ny mpitantana ny rakitra mankany amin'ny tontolon'ny playlist Elisa (Bharadwaj Raju, Elisa 22.04).
Fanamboarana bibikely sy fanatsarana ny fahombiazana
Afaka manokatra rakitra zip misy rakitra PHP diso endrika izao ny Ark (Albert Astals Cid, Arca 21.12).
Dolphin izao dia mampiseho ny angona marina rehefa mamorona lahatahiry rehefa manivana ny fijery (Eduardo Cruz, Dolphin 22.04).
Ny fanokafana rakitra .m3u * playlist amin'ny Elisa amin'ny fampiasana ny mpitantana ny rakitra dia miasa tsara (Bharadwaj Raju, Elisa 22.04).
Voatahiry izao ny satan'ny Bluetooth rehefa mivoaka rehefa mampiasa ny safidy "tadidio" (Nate Graham, Plasma 5.23.5).
Ny takelaka Plasma izao dia mipetaka haingana kokoa rehefa miditra ary toa tsy dia mianjera loatra rehefa miditra (David Edmundson, Plasma 5.23.5).
Tsy misy fianjerana intsony ny Discover rehefa manokatra ny pejin'ny famaritana ny fampiharana Flatpak izay vao nesorina (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24).
Haingana kokoa izao ny Discover hijerena ny fanavaozana ny fampiharana Flatpak (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24).
Ny fampiharana System Monitor sy applets dia mampiasa loharano vitsy kokoa amin'ny alàlan'ny tsy fandatsaham-bato tsy tapaka ny angona kapila sy sensor rehefa tsy misy na inona na inona mampiseho ny angon-drakitra nodinihina (Arjen Hiemstra, Plasma 5.24)
Azo atao izao ny manodina ny fijery ao amin'ny applet fampandrenesana rehefa misy fampandrenesana maro ao amin'ny tantara (Fushan Wen, Plasma 5.24).
Ny asa vonjimaika izay mampiseho fampandrenesana an-tsoratra toy ny "Browsing" na "Opening" dia tsy hita intsony rehefa vita ny asa (Kai Uwe Broulik, Plasma 5.24).
Ny fanitsiana ny famirapiratry ny efijery rehefa mampiasa setup multi-GPU izao dia mandeha tsara foana (Dan Robinson, Plasma 5.24).
Ny fipihana havanana amin'ny applet toetr'andro dia tsy mampiseho sakafo tsy misy dikany intsony izay milaza hoe "Open in »(Nicolas Fella, Plasma 5.24).
Ny applet mpilalao haino aman-jery izao dia mampiseho tsara ny "tsy misy milalao" rehefa mikatona ny fampiharana loharanon'ny haino aman-jery farany (Fushan Wen, Plasma 5.24).
Rehefa mivoaka sy mamerina indray ny rindranasa (na tabilao navigateur) izay milalao haino aman-jery, ny thumbnail Task Manager dia mampiseho tsara ny fanaraha-maso media (Bharadwaj Raju, Plasma 5.24).
Ny famerenan-toerana ireo rindranasa/asa voavondrona ao amin'ny Task Manager dia tsy miteraka singa tsy mety hiseho intsony rehefa kitihina rehefa mampiasa fomba lisitry ny soratra (Fushan Wen, Plasma 5.24).
Ao amin'ny fivoriana Plasma Wayland, ny anton-javatra mizana aseho amin'ny pejin'ny Asehoy sy Fanaraha-maso an'ny Safidin'ny Rafitra dia tsy voahodina amin'ny fomba tsy mendrika intsony rehefa mampiasa anton-javatra mizana ampahany toy ny 150% (Méven Car, Plasma 5.24).
Ao amin'ny fivoriana Plasma Wayland, ny anaran'ny mpanara-maso dia tsy mitovy intsony amin'ny pejy Asehoy sy Fanaraha-maso an'ny System Preferences (Méven Car, Plasma 5.24).
Ny fanoratana lahatsoratra hikaroka ao amin'ny fikandrana Emoji Picker raha vao miseho dia mandeha tsara izao (Bharadwaj Raju, Plasma 5.24).
Ny fampiharana System Monitor sy ny widget mitovy anarana dia tsy mampiseho intsony ny hafainganam-pandeha mamaky kapila ratsy (Arjen Hiemstra, Plasma 5.24).
Ny sary momba ny lohahevitra Plasma dia tsy lasa adala tanteraka ary miseho hafahafa rehefa avy niova tamin'ny dikan-teny vaovao (Marco Martin, Frameworks 5.89).
Ny kisary Monochrome Breeze dia miverina amin'ny loko manitsy rehefa mampiasa loko maizina (Rodney Dawes, Frameworks 5.89).
Rehefa mampiasa lohahevitry ny kisary izay tsy misy kisary nangatahana dia hiverina any amin'ny kisary akaiky indrindra amin'ny lohahevitra ankehitriny izy io (ohatra, hiverina amin'ny fanovana-kopia) fa tsy hitady ilay kisary ao amin'ny lohahevitra aloha. backup (Janet Blackquill, Frameworks 5.89).
Ao amin'ny Session Plasma Wayland, miasa ankehitriny ny fiantraikan'ny Morphing Popups, ka indrindra indrindra, ny tohin'ny fitaovana tontonana dia hihetsiketsika tsara rehefa miseho sy manjavona, toy ny amin'ny fivoriana X11 (Marco Martin, Frameworks 5.89).
Fanatsarana ny interface-n'ny mpampiasa
Tsy aseho sy afenina intsony ny satan'ny Dolphin arakaraka ny contexte; ankehitriny ny fahitana azy dia fehezin'ny fandrindran'ny mpampiasa hanehoana na hanafenana azy (Kai Uwe Broulik, Dolphin 21.12).
Rehefa ampidirina ao amin'ny bara fitaovana Konsole ny bokotra "Bookmarks", dia azo sokafana amin'ny tsindry mahazatra izao ny varavarankelin'ny pop-up, fa tsy kitiho ary mihazona (Nate Graham, Konsole 21.12).
Ny Spectacle izao dia manaja ny soatoavina farany ampiasaina amin'ny "ampidiro ny fanondro ny totozy" sy ny "ampidiro ny lohatenin'ny bar sy ny sisin'ny varavarankely" rehefa maka pikantsary amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana manerantany (Antonio Prcela, Spectacle 22.04).
Gwenview izao dia manohana thumbnails lehibe 512x512 sy 1024x1024 (Ilya Pominov, Gwenview 22.04).
KWrite sy Kate izao dia azo jerena amin'ny fitadiavana teny hafa toy ny "text", "editor" na "notepad" (ho an'ny KWrite) ary "programming" na "fampandrosoana" (ho an'i Kate) (Nate Graham, Kate & KWrite 22.04) .
Ny dolphin izao dia azo jerena amin'ny fitadiavana teny hafa toy ny "rakitra", "mpiandraikitra ny rakitra" ary "tambajotra iombonana" (Felipe Kinoshita, Dolphin 22.04).
Ny menio midina navigateur URL Dolphin dia mampiseho rakitra miafina rehefa mampiseho rakitra miafina ihany koa ny fijery lehibe (Eugene Popov, Dolphin 22.04).
Discover izao dia mampiseho hafatra manan-tsaina rehefa manana ny Flatpak backend namboarina tsy misy repos; Izy io aza dia manome anao bokotra azonao kitihina mba hanampiana Flathub (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24).
Rehefa mampiasa ny rafitra amin'ny fiteny hafa ankoatry ny teny anglisy, ny teny fikarohana nampidirina tao amin'ny sahan'ny fikarohana System Preferences tamin'ny teny anglisy dia hanohy hahita valiny (Fushan Wen, Plasma 5.24).
Rehefa mampiasa anton-javatra mivelatra maneran-tany, ny pejin'ny firafitry ny System Preferences dia mampiseho ny famahana ara-batana amin'ny fijerin'ny efijery izao, fa tsy ny famahana mizana tena izy (Méven Car, Plasma 5.24).
Ny fanodinkodinana eo amin'ny rakitra na lahatahiry ao anaty fako dia tsy mahatonga an'io singa io hadika mangingina any amin'ny / tmp mba hamoronana thumbnail ho azy (Eduardo Sánchez Muñoz, Frameworks 5.89).
Ny scroll bars, progress bar, ary sliders amin'ny fomba Breeze Plasma ankehitriny dia manana loko somary maizina kokoa amin'ny lamosina toy ny amin'ny fikandrana fampiharana (S. Christian Collins, Frameworks 5.89).
Mampiasa fomba mitovy amin'ny any an-kafa (David Redondo, Frameworks 5.89) ankehitriny ny tondro-fitaovana ho an'ireo singa voaroaka amin'ny fomba fijery fikarohana KRunner.
Ny saha fitadiavana kisary dia azo hifantoka amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana Ctrl + F (Kai Uwe Broulik, Frameworks 5.89).
Ny fanalahidin'ny Escape izao dia azo ampiasaina hanakatona ireo sosona fifanakalozan-dresaka amin'ny rindranasa mifototra amin'ny Kirigami (Claudio Cambra, Frameworks 5.89).
Rahoviana izany rehetra izany no ho tonga amin'ny KDE?
Ny Plasma 5.23.5 dia ho tonga amin'ny 4 Janoary ary KDE Gear 21.12 tamin'ny 9 Desambra. KDE Frameworks 5.89 dia havoaka amin'ny 11 Desambra. Ny Plasma 5.24 dia ho tonga amin'ny 8 febroary. KDE Gear 22.04 dia tsy mbola misy daty voatondro.
Mba hankafizana izany rehetra izany faran'izay haingana dia tokony ampidirintsika ny tahiry Backports avy amin'ny KDE na mampiasa rafitra fandidiana miaraka amina toerana fitahirizana manokana toa KDE neon na fizarana misy ny maodelim-pivoarany dia Rolling Release, na dia maharitra ela kokoa noho ny rafitry ny KDE aza ity farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » dabilio » KDE » Ny KDE Spectacle dia ahafahantsika manisy fanamarihana mivantana avy amin'ny fampahafantarana